विश्वकप क्रिकेट फाइनल : इङ्ल्याण्ड Vs न्यूजिल्याण्ड कसले मार्ला बाजी ? – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ श्रावण ६ सोमबार, ११:२८
विश्वकप क्रिकेट फाइनल : इङ्ल्याण्ड Vs न्यूजिल्याण्ड कसले मार्ला बाजी ?
२०७६ असार २७ गते प्रकाशित, l २२:२१
असार २७, काठमाण्डौ । विश्वकप क्रिकेटको उपाधी अहिलेसम्म ५ वटा राष्ट्रले जितेका छन् । १२ औँ संस्करणको उपाधी भने अर्को नयाँ राष्ट्रको हातमा पुग्ने भएको छ । अहिलेसम्म विश्वकप क्रिकेटको उपाधी जित्न नसकेका राष्ट्रहरु इङ्ल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले फाइनल खेल्ने तय भएसँगै उपाधी विजेता राष्ट्रको संख्या ६ पुग्ने निश्चित भएको हो ।
पहिलो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित यी दुई टोली आइतवार लण्डनस्थित लर्ड्स मैदानमा भिड्नेछन् । दुवै टोलीले यसअघि फाइनल खेलेता पनि विश्वकपको उपाधि जित्न सकेका छैनन् । इंग्ल्याण्ड चौथो पटक र न्यूजिल्याण्ड दोस्रो पटक फाइनल पुगेको हो ।
आइतबार १२औं एक दिवसीय विश्वकपको फाइनल हुने स्थान लर्ड्समा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । जहाँ पहिलो पटक च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यका साथ इंग्ल्याण्डले न्यूजिल्याण्डसँग खेल्नेछ । लिग चरणका दुवैको प्रदर्शनमा केही उतारचढाव आएको थियो । यसअघि लिगमा इंग्ल्याण्डले न्यूजिल्याण्डलाई हराएको थियो । किवी टोली सामु उक्त हारको बदला लिने अवसर समेत छ । इंग्ल्याण्डले यस अघि ३ पटक फाइनल खेले पनि उपाधिको स्वाद चाख्न पाएको छैन ।
यस पटक घरेलु मैदानमै उपाधि राख्दै त्यो चाहना पूरा गर्न चाहन्छ । उता चार वर्षअघि अष्ट्रेलियासँग संयुक्त आयोजक बन्दै पहिलो पटक फाइनल पुगेपनि न्यूजिल्याण्ड अष्ट्रेलियासँगै फाइनलमा हारेको थियो । यस पटक त्यो हारलाई बिर्साउने प्रयासमा किवी टोली छ ।
जसले जिते पनि विश्वकपमा नयाँ विजेता बन्नेछ र त्यो विश्वकप जित्ने छैटौँ राष्ट्र बन्नेछ । दुबै टोलीले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेका छैनन् । न्यूजिल्याण्ड भारतलाई पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक फाइनल पुगेको हो । यसअघि सात पटक सेमिफाइनल खेल्दा अपराजित रहेको अष्ट्रेलिया पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पराजित भएको हो । इंग्ल्याण्ड भने २७ वर्षपछि फाइनल पुगेको हो ।
यसअघि अष्ट्रेलियाले सर्वाधिक ५ पटक उपाधि जित्दा वेष्ट इन्डिज र भारतले २–२ तथा पाकिस्तान र श्रीलंकाले १–१ पटक जितेका छन् ।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप पुरुष एकदिवसीय (ओडीआई)को मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो । खेलको आधिकारिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) हो । आइसिसीको आयोजनामा विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता प्रत्येक चार–चार वर्षमा हुने गर्दछ । विश्वकप क्रिकेटको पहिलो प्रतियोगिता सन् १९७५ इङ्ल्यान्डमा आयोजना गरिएको थियो ।
२०७६ असार २७ गते सम्पादित l २२:२५